Warbixin: Loolanka Sacuudiga Iyo Qatar: Saameynta Iyo Go’aanka Ay Tahay In Soomaaliya Qaadato – Somnews
By somnews	 On Jun 5, 2017
Maanta waxaa ay carabta ku soo toostay dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxreyn iyo Masar oo xiriirkii diblomaasiyadeed u jaray dalka Qatar, waxaa dib ugu soo biiray Yemen, hadda waxaa socdo xulufeysi oo dalal ayaa ku kala biiri kara labada dhinac, arrinta mar haddii ay sidaasi tahay, waxaa haboon in aan ka hadalno sida ay tahay in Soomaalida yeesho iyo halka ay maslaxadda qaranka ku jirto.
Sacuudiga waa dalkii ugu horeeyay ee madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu booqdo doorashada kadib halka Qatarna ay tahay dalkii ugu dambeeyay ee uu booqasho ku tago, labadaba waxaa ay Soomaaliya la wadaagnaa xiriir soke, labadaba waxaa ku nool jaaliyad badan, labaduba waxaa ay ballan-qaad u sameeyeen dowladda cusub, Hadaba dalkee ayey tahay in Soomaaliya la sal dhigato? Halkee maslaxadeeda ku jirtaa, inta aan su’aalahani ka jawaabin akhriso waxa la isku heysto!!
Maalmo kadib, shirkii Riyaadh gaar ahaan May 24-keedii waxaa wakaaladda Qatar lagu baahiyay hadalo uu sheegay Amiir Tamiim-ka Qatar oo ka careysiiyay Sacuudiga iyo Imaaraadka, arrintaas oo Doxa markii dambe beenisay, sheegtana in bogga wakaaladda wararka ee qaranka la jabsaday.
Dagaal Afka Ah:
Qoraalka ay Doxa beenisay kadib, warbaahinta Imaaraadka, Sacuudiya iyo Masar waxaa ay dagaal afka ah ku qaadeen Qatar, iyaga oo falanqeyn joogta ah ka sameynayey hadalkii Amiirka ee ay Doxa beenisay iyaguna ay rumeysteen.
Warbaahinta Sacuudiga waxyaabaha ay qoreen waxaa ka mid ahaa, qoraal ay soo saareen qoyska Aala-Sheekh ee ku abtirsada Sheekh Maxamed Bin Cabdiwahaab kuwaas oo iska fogeeyay in Amiirka Qatar uu ka tirsan yahay Aala Sheekh, iskuna farac yihiin, sida uu Amiirka horay u sheegay.
SKY News qeybta Imaaraadka waxaa uu ka mid ahaa warbaahinta sida weyn uga hadashay, lana safatay Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxaa intaa dheeraa in dalalka hadda xiriirka u jaray Qatar ay hawada ka saareen Telefishinka Al-jazeera iyo bogag badan oo kale.
Al-Jazeera Oo Afka Furatay:
May 28, 2017: Al-Jazeera waxaa ay daabacday Farshaxan muujinaya Boqorka Sacuudiga, Madaxweynaha Masar iyo Madaxweynaha Mareykanka…in kasta oo Al-Jazeera markii dambe ay tirtay, sheegtana in si qaldan loo fasirtay, cudur daarna ka bixisay.
Maalin ka hor, Shabakadda Al-Jazeera waxaa ay soo bandhigtay sir laga helay Emailka la jabsaday ee Safiirka Imaaraadka ee Washington oo sheegeysa in Imaaraadka ay olog kula noqdeen Isra’il in Qatar iyo Imaaraadka la sumcad dilo oo lagu eedeeyo taageerista argigixisada.
Qoraalka Emailka Al-jazeera ay baahisay, waxaa la sheegay in Imaaradka uu diidanaa Shirka Xamaas ee ka dhacay Qatar isla markaana ay dadaal ugu jirto sidii saldhigga military ee Mareykanka looga rari lahaa Qatar.
Warbixinta lagu daabacay Al-jazeera waxaa ku jirtay in Imaaraadka uu lug lahaa inqilaabka ka dhacay Turkiga ee la doonayey in lagu diro Erdogan.
Asalka Loolanka Sacuudiga iyo Qatar:
Sacuudiga iyo dalalka kale ee xiriirka u jaray dalka Qatar waxaa ay Doxa ku eedeeyaan xiriirka ay la leeyihiin xarakada Ikhwaanka, guud ahaan Islaamiyiinta iyo dalka Iran…..kaalinta Qatar ee Libyan, Suuriya iyo Yemen meesha kama marna…xiriirka Qatar iyo Turkiga waa arrin kale.
Xiriirka Ikhwaanka iyo Islaamiyiinta:
Qatar waxaa lagu heytaa xiriirka ay la leedahay Xarakada Ikhwaanka Muslimiinta, Xarakada Dhaalibaan iyo kooxo kale oo reer galbeedka iyo dalal Carab ay ku dareen liiska kooxaha argigixisada, halka Doxa ay mar walbo sheegto in aaney macquul aheyn in koox kasta oo mucaarad ah lagu daro liiska argigixisada iyada oo isku fogeysa in ay xiriir la leedahay kooxo argigixiso ah.
Qatar waxaa kale oo ay xiriir la leedahay kooxo badan oo Islaamiyiin ah oo ka dagaalamaya bariga dhexe iyo Afrika, sidaasi waxaa ku eedeynaya Sacuudiga, Masar iyo dalal kale, tiiyoo keentay xitaa in gudaha Mareykanka gaar ahaan Cogress-ka ka hadlo xiriirka Doxa iyo waxa loogu yeero argigixisada.
Dalka Qatar waxaa uu xiriir wanaagsan kala dhaxeeyaa Iran, mana qarsadaan arrinkaas, todobaadkii tagay warbaahinta Iran waxaa ay baahisay xiriir dhanka Telefanka ah oo dhex maray Amiirka Qatar iyo Madaxweynaha Iran, ninka hore waxaa uu sheegay in dalkiisa ka go’antahay wanaajinta xiriirka labada dhinac.
Saameynta Loolanka Cusub:
Dhibaatadan cusub malaha oo keliya saameyn siyaasadeed ee waxaa kale oo ay yeelan doontaa saameyn dhaqaale, mid ganacsi iyo mid bulsho, tusaale ahaan Jaaliyadda Masar ee Qatar waxaa ay ka badan yihiin rubuc Milyan qof, waxaa su’aal ka taagan tagay aayahooda, Khaliijka waa dalal isku xiran, waana adagtay in sidaasi ay wax ku sii socdaan.
Maxay Tahay Kaalinta Jaamacadda?
Jaamacadda Carabta waa urur aanan awood laheyn, marka ay sidan dhacdo waa isku dhex yaacdaa waayo xaruntooda waa Qaahira, dalalkii ugu weynaa carabta sida Masar iyo Sacuudiga ayaa isku dhinac maray, laakin xeerka Jaamacadda waxaa ku qoran sidan:
Iyada oo la adkeynayo xiriirka dalalka Carabta iyo adkeynta isku xirkooda, waa in dal walbo uu ixtiraamo qaranimada iyo madaxbannaanida dalalka kale iyo in dadaalka la isugu geeyo waxa uu kheyr ugu jiro Carabta oo dhan.
Dhanka dagaallada: Qodobka 5aad waxaa uu ka reebayaa dowladaha in loolankooda dagaal uu lugta la galao, Haddii uu jiro duulaan ama mid laga cabsi qabo, dowladda lagu soo duulay waa in ay codsato kulan degdeg ah, qodobka 8aad waxaa uu ka hadlayaa in dowlad kasta oo xubin ka ah Jaamacadda Carabta ay ixtiraamto madaxbanaanida iyo qaranimada dowladaha kale.
Soomaaliya waa dal xiriir soke la leh labada dhinac, maanta waxaa ay aheyd in ay Muqdisho gogol dhigto sida ay Kuwait sameysay 2014kii markii Sacuudiga, Baxreyn iyo Imaaraadka ay safiirradooda kala baxeen Doxa, waxaa ay aheyd in Soomaaliya qabato dalkii gar-daran, laakin hadda ma dhici karto oo awoodeeda ma lihin, sidaa darteed waxaa haboon in masaafo isku mid ah aan ka istaagno loolanka Khaliijka, in Soomaaliya ay ka madaxbannaanaato loolan u dhaxeeyay dalal walaalo ah iyo in aan loo fududaadin sida horay u dhacday oo dalal aan la kala safanay.
Sawirro: Tababar loo soo xiray saraakiil ka tirsan hey’adda socdaalka iyo…